XOG Cusub: Xil ka qaadista Kheyre oo ka socota Villa Somalia & shaqsi caan ah oo la hadal haayo | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA XOG Cusub: Xil ka qaadista Kheyre oo ka socota Villa Somalia &...
XOG Cusub: Xil ka qaadista Kheyre oo ka socota Villa Somalia & shaqsi caan ah oo la hadal haayo
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa wada qorshe xilka laga qaadayo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud.
Illo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in Thaabit Cabdi iyo xubno ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka wada shaqeynaya sidii xilka looga tuuri lahaa R/wasaare Kheyre.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in xubnaha uu hoggaaminayo Thaabit Cabdi madaxweyne Farmaajo ay ku qal qaalinayaan sidii Xasan Cali Kheyre si nabad doon xilka uga degan lahaa haddii uu diidana mooshin laga geeyo Xildhibaanada Golaha Shacabka.
R/wasaare Kheyre iyo Thaabid Cabdi oo hadda ah Hoggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka ayaa waxaa ka dhaxeeya khilaaf ka dhashay xil ka qaadistii lagu sameeyay Thaabit cabdi markii uu ahaa guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Arrintaan ayaa si weyn looga hadal hayaa Madaxtooyada Soomaaliya.
Previous articleSawirro:Shirkii Habargidir oo Hobyo kabilowday iyo Habargidir oo soo saari rabto Go’aan saameyn….
Next articleSababta keentay inay Al-Shabaab waqtiyo isku dhow qaraxyo ka fuliso Dhuusamareeb iyo Kismaayo?
BIG NEWS: Sideed kun oo ka mid ah ciidamada Dowlada Somalia oo mushaarka laga jartay
Akhriso” Halka ay ku dambeeyaan Qoyska Caaisha ilyaas oo la sheegay inay ka guureen Gaalkacyo
Beesha Caalamka oo Kenya iyo Soomaaliya ka dalbatay hirgelinta heshiiskii Nairobi
Dhacdo Cusub: Rag iska dhigay Uhuru Kenyaata oo lacag badan dhacay
Halis Ay Maleegeyso Kenya Hadii Soomaaliya Ku Guuleysato Dacwada Badda
Qorshaha DF ee shacabka Xamar: Dayac, hala dooxo, oo ka daahi daryeelka.!!
Maxaadan ogeyn oo goor dhow kusoo kordhay madaxweynihii hore DDSI ee Cabdi Axmed Cumar